Kutarisa Kudzoka paHoridhe Kutenga muna2013, uye Chii Chaunofanira Kuchengeta Pfungwa dzegore ra2014 | Martech Zone
Kutarisa Kudzoka paHoridhe Kutenga muna2013, uye Chii Chaunofanira Kuchengeta Pfungwa dzegore ra2014
Chipiri, January 21, 2014 Kelsey Washington
Usati waisa mabhajeti ako ekutengesa mumatombo gore rino, ita shuwa kuti unotarisa kumashure pane zvatakakwanisa kudzidza kubva gore rapfuura iri. Kunzwisisa imwe data yakapusa kubva mumwaka wekutenga wa2013 kunogona kubatsira kuzivisa nzira yaunofambidzana nayo, uye kutengesa kune, vatengi. Kuti uwane izvo zvakabatsira nekukuvadza ruzivo rwevatengi panguva yegore ra2013, Baynote vakaongorora vatengesi chiuru uye vakanyora iyo data mune infographic pazasi.
Kana zvasvika pakukurudzira vatengi, 48% yevatengi vakati zviyero uye ongororo ndizvo zvakaita kuti vashanyire chitoro chepamhepo, kuchiteverwa nekusimudzirwa kweemail ku35% uye mitsva yekutsvaga yeGoogle yaisanganisira mifananidzo yezvigadzirwa pa31%. Makumi manomwe neshanu muzana yeavo vakaongororwa vakaongorora kuongororwa uye kuongororwa kaviri kana kupfuura nguva vasati vashanyira zvitoro. Nepo vakadzi vari zana nemakumi mashanu neshanu muzana vangangounza kukwidziridzwa kwemaemail pafoni yavo yekutenga-muchitoro, varume vane makumi maviri muzana vangangotsvaga mitengo iri nani kumwe kunhu vasati vatenga muzvitoro. Muna 145, kushandiswa kwezvishandiso zvezvitoro kwakakura kuchikurisa 20%, uye zvitoro zvinounza zvakajairika uye zvinehunyanzvi dhizaiti yevatengi ruzivo rwakanyanya kutengeswa.
Tsika dzenyaya? Kana kushambadzira zvigadzirwa kune vatengi, zvakakosha kuti uchengete dhijitari mupfungwa, kunyanya nhare. Vatengesi vazhinji uye vazhinji varikuita tsvagiridzo yavo uye vachitsvaga nzira dzekuwana madhiri (zano: tsambambozha Marketing), uye maitiro aya acharamba achingokura nekuwanika nhare mbozha dzakakwanisa kupa. Nekudaro, tarisa uye gadzirisa ako ongororo, sanganisira zvinoonekwa, shandisa email uye gadziridza iyo app kuti uve nechokwadi chekuti wakarongedzwa kuti ubudirire 2014.
Tags: mutengiDataecommerceEmail MarketinginfographicMarketingYeMahara neThebhu Kushambadzirachitoro